Ku darista cusub ee taxanaha Machadka Bentley: Daabacaadda Gudaha MicroStation CONNECT Edition - Geofumadas
Luulyo, 2020 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Engineering, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Machadka EBentley Press, daabacaad buugaagta wax lagu qoro iyo shaqooyinka tixraaca xirfadeed ee hormarinta injineernimada, qaab dhismeedka, dhismaha, howlgalada, jaaliyadaha iyo waxbarashada, ayaa ku dhawaaqay helitaanka taxane daabacan cusub oo cinwaan looga dhigay "Gudaha MicroStation CONNECT Edition" , hada waxaa lagu heli karaa daabacan Halkan iyo sidii buug elektiroonig ah oo ku jira www.ebook.bentley.com
Qaab-dhismeedka saddex-mugdu wuxuu diiradda saarayaa horumarinta fahamka aasaasiga ah ee aasaaska MicroStation wuxuuna raacaa tallaabo tallaabo tallaabo ah oo ay ka mid yihiin tusaalooyin dhab ah iyo layliyo dhab ah Daabacaadda ayaa akhristayaasha ku baraya sida loo isticmaalo aaladda naqshadaha 'MicroStation' ee 2D naqshadeynta aasaasiga ah waxayna aasaas u tahay waxbarashada sare. Taxanaha waxaa laga heli karaa Amazon Kindle (mugga I, II, iyo III) iyo Apple (mugga I, II, iyo III). Buugga taxanaha ahi wuxuu u adeegaa aalad waxbarasho xoog leh iyo tilmaan tixraac dhakhso leh oo loogu talagalay ardayda, bilowga, iyo ku tababbarashada xirfadleyda.
Taxanaha buuggu wuxuu ka tarjumayaa faa'iidooyinka isticmaalka Nuqulka CONNECT wuxuuna ka hadlayaa astaamaha MicroStation CONNECT Edition, oo ay ku jiraan awoodaha cusub ee CAD iyo awoodeeda iyo wadajirka si sax ah loo arko, looguna darso, dukumiinti looguna sawiro naqshadeynta macluumaadka hodanka ah ee dhammaan noocyada iyo cabirka. . Daabacaadda MicroStation CONNECT Edition waxaa loogu talagalay xirfadleyda ka shaqeysa dhammaan edbinta mashruucyada kaabayaasha nooc kasta ah.
Waxaan ku faraxsanahay inaan bixinno magacan muddo dheer la sugayey ee Bentley Institute Press, kaas oo ka caawin doona injineerada in ay ku boodaan wax soo saarka inta ay la shaqeynayaan MicroStation. Khubaro ka socota Bentley, Samir Haque, Smrutirekha Mahapatra, iyo Shaylesh Lunawat ayaa isu keenay sanooyinkooda khibradaha iyo casharada laga bartay qorista saddexdaan mug. Waxaan rajeynayaa in dhammaan akhristayaasha taxanahan ay awood u yeelan doonaan inay kordhiyaan awooddooda MicroStation CONNECT Edition oo ay ku xoojiso shaqadooda buuggan. Vinayak Trivedi, Madaxweyne kuxigeenka iyo Agaasimaha Guud, Machadka Bentley
Muuqaalka I ayaa loogu talagalay dadka isticmaala ee u baahan inay ogaadaan aasaaska barnaamijka softiweerka waxayna sharxaan sida loo aasaaso deegaanka sawirka. Muuqaalka II wuxuu ku hagaa akhristayaasha habka loo abuuro waxyaabaha iyo dib-u-habeynta xubnaha iyadoo la adeegsanayo awoodo kala duwan. Muuqaalka III wuxuu soo bandhigayaa qulqulka shaqada oo horumarsan sida abuuritaanka unugyada iyo meeleynta, sawir soo qaadashada, hagaajinta tixraaca, qoraalka xaashida, iyo daabacaadda.
Samir Haque waa Injineer iyo saynisyahano leh shahaadooyin cilmiga bayoolaji, bayoolaji, koronto iyo injineer jireed. Wuxuu ku bilaabay CAD isagoo cilmi-baarayaal ka ah UCLA, halkaas oo uu u adeegsaday MicroStation si uu u qaabeeyo qaybo 3D ah tijaabooyin ku saabsan duulimaadka duulimaadka ee daraasadda jimicsiga muruqyada iyo ilaalinta muruqyada. Haque wuxuu sidoo kale u adeegsaday softiweer si ay u sawiraan maskaxda 3D-ka machadka Cilmi-baarista Maskaxda. Intii lagu jiray 23-kii sano ee la soo dhaafay Bentley, Haque wuxuu tababbaray kumanaan isticmaale oo ku jira MicroStation wuxuuna qoray dhowr buug oo ku saabsan softiweerka. Haque hadda waxay gacanta ku haysaa hormarinta PowerPlatform, hogaaminta maareynta badeecada iyo kooxaha hubinta tayada.
Shaylesh Lunawat wuxuu ka qaatay shahaadada Bachelor ee Injineerinka Jaamacadda Pune. Wuxuu xirfad ka bilaabay soo saarista qalabka difaaca, ka hor inta uusan ka shaqeyn Bentley intii u dhaxeysay 2008 ilaa 2019 isagoo ahaa maamulaha qoraalka farsamada. Booskaan, Lunawat wuxuu mas'uul ka ahaa soo saarista buugaag kala duwan oo ku saabsan MicroStation iyo codsiyada kale ee Bentley.
Smrutirekha Mahapatra wuxuu ku biiray Bentley sanadkii 2016 asagoo ahaa qoraa farsamo wuxuuna hogaamiyaa kooxda dukumiintiyada PowerPlatform. Kahor inta uusan ku biirin Bentley, Mahapatra wuxuu ahaa naqshadeeye shirkado kala duwan leh qaabeynta dhismayaasha warshadaha, dhismayaasha ganacsiga, iyo isbitaallada. Intii uu ku gudajiray xirfadiisa dhismaha, wuxuu adeegsaday aalado kala duwan oo CAD qalab gaarsiinta mashruuca. Mahapatra wuxuu ka qaatay shahaadada AA ee maareynta tamarta Xarunta Kirsch ee Daraasaadka Deegaanka.
Post Previous«Previous Esri wuxuu daabacaa buugga shaqada dawladda ee Smarter oo uu qoray Martin O'Malley
Post Next Vexel waxay soo saartaa UltraCam Osprey 4.1Next »